အဆီပြန်ခြင်းကြောင့်အလှပျက်လာတဲ့ဆံပင်တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းရှင်းလင်းသန့်စင်ပေးနိုင်မယ့် Hair Sheets! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အဆီပြန်ခြင်းကြောင့်အလှပျက်လာတဲ့ဆံပင်တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းရှင်းလင်းသန့်စင်ပေးနိုင်မယ့် Hair Sheets!
အဆီပြန်ခြင်းကြောင့်အလှပျက်လာတဲ့ဆံပင်တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းရှင်းလင်းသန့်စင်ပေးနိုင်မယ့် Hair Sheets!
ဆံသားတွေအဆီပြန်လာခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားကတော့ အဆီပြန်လွယ်တဲ့ဦးရေပြားကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း( ဒါမှမဟုတ် ) ပုံမှန်ခေါင်းလျှော်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စေ ခေါင်းလျှော်ဖို့ရန်အခက်အခဲလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှ အရေးကြီးသွားစရာလာစရာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အရမ်းအခက်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကိုပြန်လည် သန့်ရှင်းပေးဖို့ရန်အတွက် အချို့ Spray ဘူးလေးတွေထုတ်လုပ်လာကြပေမဲ့ ဦးရေပြားနဲ့ဓာတ်မတည့်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြရပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ မကြာသေးမီကမှ OUAI ကနေအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Anti-Frizz Hair Sheets လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Product ဟာ sheet ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆံပင်သားဓာတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ စက္ကူပုံသဏ္ဍန်မျိုးဖြစ်ပြီး လွယ်ကူစွာ ဆံပင်အရင်းမှ အဖျားပွတ်တိုက်ရုံနဲ့တင် အဆီတွေကိုစုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ ဆံသားလေးကို တခဏချင်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြောင့်ထား၊ ကောက်ထား၊ ကျစ်ထား၊ ခြေထားတဲ့ဆံပင်အားလုံးကို အလွယ်တကူနဲ့ပြန်လည်သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Reggae ကိုကြိုက်လွန်းလို့ Dreadlock လုပ်ထားတဲ့ဆံသားတွေလည်း ဦးရေပြားသန့်ရှင်းဖို့လည်းအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် အရမ်းအဆင်ပြေအသုံးတည့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Sheet လေးပေါ်လာတာကြောင့် ခေါင်းမလျှော်ဘဲလည်း မနေနဲ့နော်။ ☺ ကျန်းမာရေးကြောင့်သာမဟုတ်ရင် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အလေးပေးသင့်တယ်နော်။
ဦးရေပြားတိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပေါင်းစပ်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပျိုမေတို့သာမက ကိုကိုတို့ပါ အကြိုက်တွေ့မှာပါလို့ လက်တို့လိုက်တယ်နော်။
Image Source: theouai.com
နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေအတွက် Lip Liner ရဲ့ အရေးကြီးပုံက ဘာဖြစ်မလဲ
အချိန်တိုအတွင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းနူးညံ့တဲ့ ဆံကေသာကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Restore Smooth Blowout Concentrate!